Awood intee dhan ayay leeyihiin militariga Iiraan? | Xaysimo
Home War Awood intee dhan ayay leeyihiin militariga Iiraan?
Awood intee dhan ayay leeyihiin militariga Iiraan?
Dowladda Iran ayaa wacad ku martay inay aargoosan doonto ka dib dilkii abaanduulihii ugu awoodda badnaa militariga dalkaasi oo khamiistii ay Mareykanka duqeyn ku dileen.
“‘aargoosi xanuun badan uu sugayo dambiileyaasha” ka dambeeyay weerarka,waxaa sidaasi sheegay Qasem Soleimani.
Hadaba Maxaan kala soconaa awoodda militari ee Iran?
Intee ayay dhan tahay cududda ciidamada Iran?
Tirada militariga Iran ayaa lagu qiyaasaa 523,000 oo leh cutubyo kala duwan, sida uu sheegay machadka barashada istaraatijiyada ee fadhigiisu yahay UK.
Waxaa tiradani ka mid ah 350,000 oo ah ciidamada rigliga ah, iyo ugu yaraan 150,000 oo ah ciidamada ilaalada kacaanka ee loo soo gaabiyo (IRGC).
Waxaa sidoo kale jira 20,000 oo kale oo ah ciidamada badda islamarkana qeyb ka ah kuwa ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan.
Waxay ciidamadan ku howlgalaan tiro ah doomaha ilaalada xeebaha iyaga oo si gaar ah uga howlgala marin biyoodka Hormuz, oo horey dhowr iska hor imaad oo lagu afduubtay Maraakiib uu uga dhacay 2019.
Ciidamada ilaalada kacaanka Iran waxay sidoo kale maamulaan guutada lagu magacaabo Basij, oo ah xoogag si tabarucaad ah u howlagala islamarkana gacan ka geysta cadaadiska lagu sameeyo dadka dowladda ka soo horjeeda ee gudaha Iran.
Ciidamada ilaalada kacaanka Iran ee IRGC ayaa waxaa la asaasay 40 sano ka hor si ay u difaacaan nidaamka islaamiga ah ee Iran.
Ciidamada ilaalada kacaankaa Iiraan
Waa sidee howlgaladooda dibadda?
Cutubka lagu magacaabo Xoogaga Quds, ee uu hogaamin jiray Janaraal Soleimani, ayaa waxay goobaha ka baxsan Iran ka fuliyeen howlgalo, iyaga oo wakiil ka ah ilaalada kacaanka islamarkana waxay si toos ah u hoos tagaan hogaamiyaha ruuxiga, Ayatollah Cali Khamenei.
Waxaa la rumaysan yahay in xoogagga lagu magacaabo Qudus ay tiradooda dhan tahay qiyaastii 5,000.
Cutubkan ayaa waxaa loo daagureeyay Suuriya waxaana qeyb ka ah la taliyayaal militari oo daacad u ah madaxwaynaha Suuriya Bashar al-Assad.
Dalka Ciraaq, waxa ay taageereen maleeshiyaadka Shiicada oo iyagu ka adkaaday kooxdii la baxday dowladda Islaamka.
Balse, Mareykanka ayaa sheegay in xoogaggan Qudus ay door ballaaran ciyaaraan iyaga oo taageero dhaqaale, mid tababar iyo qalab siiya ururo ay Washington u aqoonsan tahay argagixiso kuwaasi oo ka howlgala bariga dhexe.
Waxaa ururadan ka mid ah ururka Shiicada ee Xisbullah iyo kooxda Falastiiniyiinta ee Islamic Jihad.
Dhibaato dhaqaale iyo cunaqabateyno ayaa curyaamiyay hubka ay Iran dibadda ka soo dhoofsan jirtay, hubkaasi oo ah mid si aad ah u yar marka loo barbar dhigo dalalka kale ee gobolka.
Qiimaha qalabka difaaca ee Iran ay dibadda ka keensatay intii u dhaxeysay 2009 ilaa 2018-kii ayaa ah mid u dhiganta 3.5% marka loo barbar dhigo Sacuudiga isla sanadahaasi intii ay soo iibsadeen , sida uu sheegay machadka caalamiga ah ee cilmi-baarida nabadda ee fadhigiisu yahay Stockholm.
Inta badan waxay qalabka gaashaandhiga ay Iran ka soo iibsatay Ruushka iyo Shiinaha.
Ciidamada Iran ayaa 2019 markab ku gooshayay calan UK ku qabsaday gacan biyood Hurmuz
Iiraan ma leedahay Gantaalo?
Haa- Awoodda gantaalada Iran waa mid ka mid ah quwadeeda militari ee ugu muhimsan, iyada oo ay jirto in awoodda dhanka cirka ay ka liidato marka loo barbar dhigo dalalka ay is hayaan sida Israa’iil iyo Sacuudia.
Waaxda gaashaandhiga Mareykanka ayaa ku tilmaamtay in awoodda Gantaalada Iiraan ay yihiin kuwa ugu balaaran bariga dhexe.
Gantaalada ayaa ka kooban kuwa riddada gaaban iyo Gantaalada riddada dhex.
Waaxda gaashaandhiga Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in Iran ay tijaabinayso Tiknoolajiyadda hawada sare si ay awood ugu yeelato hormarinta gantaalada qaaradaha isaga gudba oo iyagu meel fog gaari kara.
Hasa yeeshee, barnaamijka gantaalada riddada dheer ayay Iran hakisay taasi oo qeyb ka aheyd heshiiskii Niyukleerka ee ay Iran 2015 la galeen dalalka quwadaha waawayn,sida laga soo xigtay machadka Royal United Services Institute (Rusi).
Balse, Iiraan ayaa mar kale dib u bilaabi karta barnaamijkaasi iyada oo la eegayo hubinti la’aanta heshiiskaasi.
Hasa yeeshee, Gantaalada Iraan ayaa gaari kara Sacuudiga iyo gacanka Carbeed , waxaana sidoo kale suuragal ah in ay Israa’iil bartilmaameedsan karaan.
Bishii May ee sanadkii aanu soo dhaafnay, Mareykanka bariga dhexe u daadgureeyay gantaalada ka hortaga gantaalada xilli ay xiisadda gobolka cirka isku sii shareeraysay.
Waxay arrintani micnaheedu taay in gantaaladan ay ak horgati karaan gantaalada Kuruuska kuwa riddada dheer iyo diyaaradaha casriga ah.
Hubka kale ee ay Iiran haysato
Iyada oo ay jirto sanooyiin badan oo cunaqabatayn ah, ayaa hadana Iiran waxay sameysatay awood dhanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Dalka Ciraaq, Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiran ayaa 2016 waxaa loo isticmaalay dagaalkii ka dhanka ahaa IS.
Iran ayaa sidoo kale waxay diyaaradaheeda aan duuliyaha wadin mar galeen hawada Israa’iil iyaga oo ka soo kicitimay saldhig Suuriya ku yaalla.
Bishii June 2019, Iiran ayaa soo ridday diyaarad ah nooca aan duuliyaha laheyn oo Mareykanku leeyihiin, waxay Iran ku andacootay in ay diyaaradaasi soo gashay hawada Iran.
Marka aan dhanka kale ka eegno, barnaamijka diyaarada aan duuliyaha laheyn ayaa waxay Iiraan doonaysaa inay ka sii iibiso ama ay u gudbiso dhinacyada ay saaxibka yihiin ee gobolka, waxaa sidaasi sheegay Jonathan Marcus, oo ah wariyaha BBC ee gaashaandhiga iyo dublamaasiyadda.
Sanadkii 2019, weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa lagu qaaday xarunta shirkadda shidaalka ee Aramco.
Mareykanka iyo Scuudiga labaduba waxay weerarkaas ku eedeeyeen Iran, inkastoo ay Tehran beenisay inay ku lug leedahay.
Waxaa weerarkaasi masuuliyadiisa sheegtay kooxda Xuutiyiinta ee Yemen.
Iiraan ma leedahay awood weerar dhanka Internet-ka?
Ka dib weerarkii dhanka internet-ka ee 2010 lagu qaaday xarunta Niyukleerka Iiraan, ayaa waxay Tehraan xoojisay awoodeeda tiknoolajiyada la xiriirta Internet-ka.
Ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa la rumaysan yahay in ay leeyihiin xarun looga hortago weerarada dhanka Internet-ka.